लालपुर्जा त २८ वर्ष पछि पाए भने सहजै मतदान गर्न कहिले पाउँछन् मासपुरबासीले ? – Yug Aahwan Daily
लालपुर्जा त २८ वर्ष पछि पाए भने सहजै मतदान गर्न कहिले पाउँछन् मासपुरबासीले ?
युग संवाददाता । २६ बैशाख २०७९, सोमबार १३:१९ मा प्रकाशित
हुम्ला । जिल्लाको एउटा यस्तो बस्ती छ जहाँ हाल सम्म पनि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेझै थिए बल्ल २८ वर्ष पनि हात हातमा लालपुर्जा पाए पछि उनिहरु खुसी देखीएका छन् ।
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट भन्दा निकै टाढा रहेको दुर्गम वस्तिका रुपमा चिनिने ताजाँकोट गाउँपालिका–३ मासपुर गाउँका स्थानीयले २८ वर्षपछि लालपुर्जा पाएका छन् । ०५० फागुन १९ मा मासपुरको मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएका २४ घरधुरीले २८ वर्षपछि लालपुर्जा पाएका हुन् । पञ्चायत कालदेखि साविकको मैला गाउँ विकास समिति ७ नम्बर वडाको बँदेलचौरमा एक माना चामल र नुन जग्गाको तिरो तिर्दै आएका मासपुरवासीले लामै सम पछि भए पनि हातमा लालपुर्जा पाएकोमा स्थानीय ९२ वर्षीया दलवीर बुढाको भनाइ छ ।
मालपोत कार्यालय हुम्लाले भने मोठमा दर्ता भएको लालपुर्जा लिन जग्गाधनी नै नआएको बताएको छ । २०५० फागुन १९ गते जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको तर जिल्ला सदरमुकामबाट निकै टाढा भएकाले उनिहरु लालपुर्जा नै लिन नआउको मालपोत कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ताजाँकोट गाउँपालिका जाँदा स्थानीयले लालपुर्जा नपाएको थाहा भएको थियो। तर, गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिएर आएपछि प्रतिलिपि दिने भनिए पनि स्थानीय नआएका मालपोत कार्यालयले बतायो । गाउँपालिका अध्यक्ष बाग्दल मल्लको रहोबारमा त्यहाँका १२ घरधुरीलाई गत वर्ष चैतमै लालपुर्जा दिइएको थियो, दुई घरधुरीले सुरुमै लालपुर्जा लिइसकेका भए पनि अन्यले हालसम्म पनि लालपुर्जा पाएका थिएनन् ।
लालपुर्जा त २८ वर्ष पछि पाए भने सहजै मदतान गर्न कहिले पाउँछन् मासपुरबासीले ? २८ वर्ष पछि मात्र लालपुर्जा पाएका मासपुर गाउँका बासिन्दालाई मतदान गर्न ३ दिन हिड्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ २०७० देखी मात्र मतदान गर्न पाएका त्यहाँ नागरीहरुले अहिले पनि ३ दिन हिडेरा मतदान गर्न आउनु पर्ने बाध्यता छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको ताजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मासपुर गाउँका बासिन्दाले मतदान गर्नकै लागि तिन दिन खर्च गनुपर्ने बाध्यता अँझै कायम रहेको छ । मतदान केन्द्र टाढा र मतदाता समेत थोरै हुँने गरेकाले पनि मतदान केन्द्र स्थापना हुँन नसकेकोे स्थानिय टेक बहादुर रोकायाले बताए । मासपुर गाउँका बासिन्दाको मतदान केन्द्र वडा कार्यलय नजिकै रहेको कैलाश आधारभुत बिद्यालयमा पुग्न पैदल हिडेर एक दिन लाग्ने गरेकोे छ । एक दिन जान, एक दिन आउन र एक दिन मतादान गर्ने समय गरेर तिन दिन समय लाग्ने गरेको स्थानिय रोकायाले वताएका हुँन् ।
२३ घरधुरी रहेको मासपुर गाउँमा २०७८ सालको जनगणना अनुसार १ सय ३ रहेको छ । ६० बर्ष माथीका १० जना मतदाता छन् भने बाँकी २७ जना बयस्क मतदाता गरी उक्त गाउँमा मतदाता परिचय पत्र भएका ३७ जना रहेको ३ नम्बर वडा कार्यलयले ताँजकोटले जनाएको छ । मतदान केन्द्र टाढा रहेकाले बृद्ध बिद्धाहरु मतदानबाट बन्चीत हुँने भएका छन् उक्त गाउँमा जाने नत सडक नै पुगेको छ नत अन्य कुनै बिकास निमार्णका कार्यहरु भएका छन् उनले भने ।
एउटा प्राथमीक बिद्यालय छ बिद्यालय भए पनि सरकारको निगरानी भन्दा बाहिर रहेकाले शिक्षकहरु कहिले आउँछन् कहिले आउँदैनन् मतदान केन्द्र भएको बिद्याल कैलाश आधारभुत बिद्यालय थापागाउँमा मैला आउँने जाने बाटो निकै लामो र असहज भएकाले पनि बृद्धबृदाहरु त्यहाँ जान नसक्ने भएकाले पनि मतदानबाट बन्चीत हुँने भएका छन् वडा कार्यालयले भन्यो यस किसिमको बाध्यता जिल्ला निर्वाचन कार्यलय हुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यलय हुम्लालाई पटक पटक जानकारी गराएको भएपनि मतदान केन्द्र स्थापना गर्नमा कतै बाट पहल भएन,अन्य बिकल्प पनि छैन मतदान केन्द्र टाढा भएकाले मासपुर गाउँका केही बृद्धाहरुले यस पटकको निवाृचनमा पनि मतदानमा भाग लिने नपाउने जस्तै देखीन्छ ।
तर पनि दलहरुले बिकासका आसपासन र पैसा दिएर ति मतदाताहरुलाई ३ दिन हिडाएर पनि ल्याउने सम्भावना पनि त्यतिकै देखीन्छ । एकै भोटको पनि आवश्यक पर्ने भएकाले बृद्धबृदाहरुलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन सक्ने देखीएको छ ।
यती बेलाको निर्बाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओबादी केन्द्रका धनबिर बुढालाई सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । यस अघि नेकपा एमालेले त्यहाँको नागरीक याङ्जु बढालाई जिल्ला भुमी आयोगको सदस्य बनाएको थियो यि बाहेक अन्य नेताहरु अघि नबढेको बुझिएको छ । २०७४ सालको स्थानिय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि मतदानमा पनि उनिहरु सहभागि भएका थिएनन् । स्थानिय रोकायाले भने मासपुरका धेरैले त मतदाता परिचय पत्र समेत बनाएका छैनन् मतदान केन्द्र टाढा छ, बनाएर पनि के गर्नु । जिल्ला निर्वाचन कार्यलय हुम्लाका अनुसार योपालि नयाँ मतदान केन्द्र थप्ने कुनै कार्यक्रम नभएकाले मतदान केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको वताएको छ । हुम्लामा सबै भन्दा टाढा रहेको मतदान केन्द्र यहि हो मतदान केन्द्र आबश्यक थियो तर पनि सरकारले थप्न सकेको छैन ।
२०७० को संबिधान सभाको चुनाव देखी गाउँका बासिन्दाले गाउँमा मतदान केन्द्र हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् मतदानकै लागि बाटो खर्च खाना नास्ताको लागि खानेकुरा बोकेर जानु पर्ने बाध्यता भन्दै गाउँमा मतदान केन्द्र हुनु पर्ने जनाए । गाउँको राजनितिक पहुँच कम भएकाले अहिले सम्म कसैले नसुनेको स्थानियले वताए । सदरमुकाम सिमकोट बाट ५ दिन पैदल लाग्ने यो गाउँमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
गर्भवति महिला र बुढापाकाहरु त मतदान गर्न नआउने सम्भावना धेरै छ । उक्त गाउँ हुँदै जाने सैन सैपाल पर्यटकीय पद मार्ग नाम दिएको सडक निमार्णलाई तिब्रता दिने भन्दै बिभिन्न समयमा नेताहरु आउने,अनुगमन गर्ने काम बाहेक अरु केही नभएको बताएका छन् । उक्त पद मार्ग कुवाडीखोला हुँदै काँडागाउँ जिमान हुँदै लिने भन्दै बिभिन्न पटक सर्बे समेत भएका छ तर उक्त सडक अहिले सम्म काँडागाउँ जिमाना सम्म मात्रै पुगेको छ । उक्त गाउँबाट मासपुर गाउँमा पुग्न करिब एक दिन हिडेरै जानु पर्ने छ ।